Fara John’s / Rajoelina : Mitovy…mpisandoka ! -
AccueilRaharaham-pirenenaFara John’s / Rajoelina : Mitovy…mpisandoka !
« Manohana anao daholo ny artista », hoy i Fara John’s raha nila doka sy dera tamin’i Andry Rajoelina. Tena hita mihitsy hoe olona tsy mahalala na inona na inona ity Fara John’s ity, tsy mahafantatra akory izany ny hoe «valeur culturelle», tsy mahalala ny zava-dehibe indrindra eo amin’izany sehatry ny kanto izany akory ary ho isan’ireo mpihira tsy ho re intsony afaka fotoana fohy.
Mba fantatr’ity Fara John’s ity ve fa io olona antsoina hoe Andry Rajoelina io no nanome tsodrano ireo andian’olona nandoro ny TVM sy ny RNM mozea nirakitra ireo vakoka sy tahirim-peo ary raki-kira Malagasy nanomboka tamin’ny fahagolantany? Ny zava-dehibe indrindra ho an’ny artista mihitsy no indray nanjavona tao anatin’ny iray minitra. Tsy trano be na fiara raitra be mantsy no manan-danja ho an’ny artista mendrika izany anarana izany fa ny « œuvre » sy zava-bitany.
Lasa lavenona tao amin’ny TVM sy ny RNM avokoa ny tantara sy ny vakoka momba ny artista Malagasy raha tsy hiresaka fotsiny afatsy ny tarihim-peo an’i Mama Sana (mpitendry valiha nampitolagaga ny vazaha, nampiasain’ny tarika Deep Forest tao amin’ny raki-kira nitondra ny lohanteny Noonday Sun mihitsy ny feony), ireo mpihira Malagasy nanana ny naha izy azy voarakitra tao anatin’ireny “disque 78 tours sy 45 tours ireny” (Discomad, Kaiamba), ireo hira Malagasy nanakoako hatrany am-pita noraiketina tanatin’ireny “bande magnétique” ireny, sns. Tsy fantatr’i Fara John’s ny maha sarobidy izany rehetra izany koa tsy homen-tsiny izy.
Tsy dia mahagaga loatra koa anefa raha misy fifankazahoana eo amin’i Fara John’s sy Andry Rajoelina: ny iray tsy mahalala na inona na inona, tsy mahafantatra akory ny maha sarobidy izany vakoka izany, ny faharoa nivelona tamin’ny fampiasana sy fanararaotana mihitsy aza ny zava-bitan’ny artista, tsy nanao afatsy nikosokosoka kapila, … olona mitovy! Raha mahalala ny maha sarobidy izany antsoina hoe “valeur culturelle” izany i Andry Rajoelina tsy nanome tsodrano ireo andian’olona nandoro ny TVM sy ny RNM nandritra ny fanonganam-panjakana notarihany ny taona 2009.
Natambatry ny tantara hiara-dia ny olona mitovy mba ho hitan’ny be sy ny maro. Koa tsy mahagaga raha nanambara ny fanohanany an’i Andry Rajoelina i Fara John’s, izay marihana ihany koa fa mbola nisandoka ny anaran’ny artista Malagasy. Andry Rajoelina moa mazava ho azy fa dia ireny nisandoka fanjakana tamin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana ireny.
Fara John’s izay tsy mahalala na inona na inona indray ve no miseho hoe solontenan’ny artista ! koa nahoana no dia atao tsindrio fa lavo tahaka izao ny artista ?